Thorge Berger - ဂျာမနီမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခရီးသွား ဓာတ်ပုံဆရာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - ONE DAILY MEDIA
Thorge Berger – ဂျာမနီမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခရီးသွား ဓာတ်ပုံဆရာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
သူ့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြောပြခဲ့ပေမယ့် အဲဒါထက် အများကြီး ပိုဦးတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ ထက်မြက်သော ခရီးများကို စီစဉ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက် စိတ် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေမည့် ၎င်း၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရရှိစေမည့် ဂျာမန်လူမျိုး ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤကောင်းမွန်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် Thorge သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ခရီးသွားဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦး၏ ခရီးသွားခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများတွင်လှပသည့်အရာများကို အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဟပါတယ်။
တစ်နှစ်မှာ အနည်းဆုံး ၆ လလောက် အမျိုးအမည်မသိတဲ့လမ်းမှာ နေရသူတစ်ယောက်အတွက်၊ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ လှပတဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီး Thorge ဟာ ဒီလှပတဲ့ဂြိုလ်မှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို စူးစမ်းလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဤဓာတ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်သက်သည့် အချက်သုံးချက်-
(၁) Thorge ၏ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည့် အခိုက်အတန့်ကို ဤနေရာတွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာဆန်းကြယ်ပါတယ်။
(၂) အရောင်အသွေး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုတို့သည် လွန်ကဲစွာ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမျိုးမရှိပါဘူး။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ထားရှိကာ ရိုးရှင်းစွာပြီးပြည့်စုံပြီး Thorge သည် အရောင်အသွေးနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ထင်ရှားကျော်ကြားသောပြသမှုအတွက် အတုယူဖွယ်ပါပဲ။
(၃) နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း နောက်ခံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။ ကင်မရာနဲ့ အပြင်ထွက်တိုင်း ဒီလို ရအောင်ယူနိုင်ရင် ဒီနေ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံဆရာများစာရင်းမှာ ပါဝင်လာမှာ သေချာပါတယ် အခု ကျွန်တော်တို့မှာ Thorge Berger ရှိနေသလို မျိုးပေါ့လေ
ကျွန်တော့်နာမည် Thorge Berger ပါ။ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Cologne တွင် 1966 တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ခရီးသွားဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော်ဟာ တိုက်ကြီး ၅ ခုနဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင် ဓာတ်ပုံမဂ္ဂဇင်းများစွာ (ဥပမာ Fotoforum၊ Fotoespresso၊ Digital PHOTO …) နှင့် photoblogs (Nikonrumors.com၊ PetaPixel.com …) တို့အတွက်လည်း တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် ဓာတ်ပုံလေ့လာရေးခရီးများကို စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နည်းပြ၊ နည်းပြနဲ့ အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် အခြားအလုပ်တစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။
— ခရီးသွားဓာတ်ပုံဆရာလုပ်ရတာ ဘယ်လိုခံစားရလဲ ? သင့်ဘဝကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ ???
ကမ္ဘာသည် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး ခရီးမသွားသူများ က စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းသာဖတ်ပါ” ဟူသော ရှေးကိုးကားချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ( Saint Augustine မှဟုထင်ပါတယ် သို့သော် မသေချာပါ) လောလောဆယ်တော့ အခန်းအချို့ကို ဖတ်ပြီးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ အရမ်းသိချင်နေတုန်းပါပဲ။ ထို့ကြောင့် လမ်းပေါ်ရောက်တိုင်းစိတ်အားထက်သန်မှုနောက်သို့ လိုက်နိုင် တာကြောင့် အသက်ရှင်လျက် အလွန်ပျော်ရွှင်သော ခံစားချက်ကို ခံစားရပါတယ်။
— သင့်ပုံတွေထဲမှာ Portraitsပုံတွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်။ အဲ့ပုံတွေအကြောင်း နည်းနည်း ရှင်းပြပေးနိုင်မလား ??
ငါက လူတွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိက သဘောထားတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ အလှတရားကို မြင်ဖို့ပါပဲ။ သူစိမ်းတွေဆီ ချဉ်းကပ်တဲ့အခါ များသောအားဖြင့် သူတို့က ကျွန်တော့်ဆီကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရတာကို စိတ်သဘောထားကြီး ပေးပါတယ်။ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ။
— ခရီးတစ်ခုကို ဘယ်လိုစီစဉ်ပြီး သွားလေ့ရှိလဲ ??
နိုင်ငံတစ်ခု ၊ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်မိတိုင်း မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ် (ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ရှည်လျားတဲ့ list တစ်ခုရှိပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးတက်များပြားလာနေပါတယ် 😉 ) ဒါပေမဲ့ အလေးအနက်ထားပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှ ခရီးသွားဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ကို ၃-၄ ခေါက်လောက် ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ၂ လလောက် အချိန်ပိုကြာအောင် လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားတယ်။ အခုထိ အကြာဆုံးခရီးက ၆ လ ဆက်တိုက်ပဲ။ နောက်တော့ အစီအစဉ်တွေ အများကြီး လိုအပ်တာပေါ့။ မကြာခဏဆိုသလို ရိုက်ကူးချင်တဲ့အရာတွေကို စီစဉ်ဖို့ပါပဲ။ အများအားဖြင့်တော့ သွားမယ့် ခရီးစဉ်အတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်း ပုံဖော်မြေပုံကို ပြင်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေ၊ ဒေသခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ပြုပြင် တိုင်ပင်တာတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက အကျိုးရှိတယ်တာကြောင့် ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ ဆက်လုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့် တစ်ခါတရံမှာ ငါဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဖူးတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ သူတို့ဆီမှာ ပေါ်လာတတ်တယ်။
— သင့်ကို ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံရဖို့ ဘာတွေကတွန်းအားပေးလဲ ?
အဖြေက စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး ပြည့်သွားနိုင်တယ်… ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဟာ ကြည့်ရှုသူကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ထိမိစေတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိတာကြောင့် မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံ ပေါ်လွင်ဖို့ ပိုခက်လာမယ်။ အကူအညီပေးနိုင်သော စံသတ်မှတ်ချက်များ ရှိပါတယ်။ Jim Richardson က “သင် ပိုကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ချင်ရင် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အရာတွေရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ပါ။”လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ အဲဒါက သေချာပေါက် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွဲ့စည်းမှု နဲ့ အလင်းရောင်ကလဲ အရမ်းအရေးပါပါတယ်။
— သင့်ပုံတွေကနေ တဆင့် ပရိတ်သတ်တွေကို ဘာတွေ ခံစားရစေချင်လဲ ??
မတူညီကွဲပြားသော ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ဤကမ္ဘာ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများမှ မတူညီသော နေထိုင်မှုပုံစံများကို တန်ဖိုးထားနားလည်ရန်၊ ပြီးတော့ မတူညီကွဲပြားသော ကမ္ဘာကြီး၏ ဆွဲဆောင်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုကို မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှပင် ကွဲပြားနေပါစေ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများကဲ့သို့ မျှဝေခံစားနေကြဆဲဖြစ်ပြီး ဒါကို ချိတ်ဆက်မိရင် ကြိုးစားအားထုတ်ရကျိုးနပ်မယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
— သင်အားကျရတဲ့ အရင်းမြစ်
တကယ်တော့ တခြားဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ လက်ရာတွေကို မြင်ရတာ သဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် (ဓာတ်ပုံ) မဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်ပြီး ဓာတ်ပုံစာအုပ်တွေဝယ်၊ ပြပွဲတွေနဲ့ တင်ဆက်မှုတွေဆီသွားပြီး တစ်ခါတလေမှာ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုနဲ့ လေ့လာသလို အမှားလုပါမိတဲ့အခါ လည်း မှတ်သားပြုပြင်ရပါတယ်။ ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဂီတကို လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအနေနဲ့လည်း သုံးပါတယ်။ အချို့သော တေးဂီတများသည် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတွက် စိတ်ကူးများကိုပုံ‌ဖော်နိုင်သည်ဟု ခံစားမိပါတယ်။ .. ထို့အပြင် အခြားဓာတ်ပုံဆရာများနှင့် ခရီးသွားရင်း အကြံဥာဏ်များ ဖလှယ်ရန်လည်း အလွန်စိတ်အားထက်သန်ပါတယ်။ ၎င်းသည် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် ဓာတ်ပုံလေ့လာရေးခရီးများ စီစဉ်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ကောင်းမွန်သောပုံများကို ဖန်တီးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အပြန်အလှန်အားပေးကြပါတယ်။
— ဓာတ်ပုံပညာလေ့လာရင်း ရရှိဖူးတဲ့ အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်မှုတစ်ခုရယ် ၊ သင်ခန်းစားရခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ပြောပြပေးပါလား ??
2013 မှာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနိုင်ရလို့ အရမ်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ Fotoforum မဂ္ဂဇင်းမှ ဦးစီးကျင်းပသော ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ “Grenzgang Fotograf des Jahres” ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို “တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံဆရာ” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Allahabad ရှိ Kumbh Mela” ပွဲတော်အတွင်း ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံဖြင့် ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ၎င်းသည် အကြီးမားဆုံးပွဲတော်နှင့် (ထိုအချိန်အထိ) လူများစုဝေးမှုတွင် အကြီးမားဆုံးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ 2017 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ ပရိသတ်များစွာရှေ့ ဂျာမန်ပြတိုက်တစ်ခုတွင် (2.5 နာရီကြာ) တင်ဆက်မှုကြီးတစ်ခုကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
2010 ခုနှစ် Steve McCurry နဲ့ ခရီးထွက်တုန်းကလည်း အများကြီး သင်ယူခဲ့ရတယ်။ တစ်ခုကတော့ ရနိုင်တဲ့ အလင်းရောင်ရဲ့ အရည်အသွေးကို ပိုအာရုံစိုက်ဖို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် စောစောထပြီး အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်မှာ ရိုက်ကူးဖို့ သင်ယူခဲ့ရတယ်။ အများအားဖြင့် ထူးထူးခြားခြား (ခရီးသွား) ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို အလယ်အလတ်ပုံနှင့် ကွဲပြားစေသည်မှာ ဓာတ်ပုံဆရာ၏ ဇွဲ၊ ရဲရင့်မှုနှင့် သည်းခံခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ ဓာတ်ပုံတွင် အများအားဖြင့် မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဆီသို့ ဦးတည်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် လောလောဆယ် အရေးကြီးတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခရီးသွားဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးနေပါတယ်။ ဒါကို 2018 တွင် ထုတ်ဝေပါမယ် ။ ထို့နောက် ခရီးပန်းတိုင်များနှင့် အလွန်ရှည်လျားသော ဆန္ဒစာရင်းတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ ဒီနိုင်ငံက ကျွန်တော့်ရဲ့ ထိပ်တန်းခရီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
— အတုယူရတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ
သေချာတာကတော့ Steve McCurry ပါ။ လက်ရှိ ဆွေးနွေးမှုတွေအပြင် သူက ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထူးချွန်တဲ့ Sebastiao Salgado ကိုလည်း ကျွန်တော် နှစ်သက်ပါတယ်။ Art Wolfe နှင့် Eric Lafforgue တို့က ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သဘောကျသော လက်ရာမြောက်သော ခရီးသွားဓာတ်ပုံဆရာနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ဓာတ်ပုံတွေထဲက ဘယ်ဟာကို အကြိုက်ဆုံးလဲ မေးရင် မနက်ဖြန်ရိုက်မယ့်ပုံပါပဲ ” – Imogen Cunningham
— အသုံးပြုသော ကိရိယာများ
ကျွန်တော် အသက် 16 နှစ်အရွယ်ကတည်းက Nikon ကြိုက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိကကင်မရာတွေက D4s နဲ့ D500 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ D3s နဲ့ D7000 လည်း ရှိသေးပြီး မှန်ဘီလူးများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အများဆုံးသုံးတဲ့ 24-70mm f/2.8၊ 70-200mm f/2.8၊ 85mm f/1.4 ( portrait တွေအတွက် အဓိက) 16-35mm f/4 နဲ့ 35mm f/1.4 ကို မကြာသေးခင်ကမှရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မနှစ်က ကတည်းက ကျွန်တော် 14-40mm f/2.8 နဲ့ 40-150mm f/2.8 ပါတဲ့ Olympus OD-D E-M5 Mark II ကင်မရာကိုလည်း သုံးပါတယ်။ Micro 3/4 စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် မှန်ဘီလူးများ၏ ဆုံမှတ်အရှည်ဟာ 24-80mm နှင့် 80-300mm နှင့် ညီမျှပါတယ် ။ သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်သည် အလွန်အဆင်ပြေကြံ့ခိုင်ပြီးသူ၏ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကအလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ် ။ Olympus က ဒီမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဝင်ရိုး၅ ခုရဲ့ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုက အလွန်အထင်ကြီးစရာပါပဲ။
— ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် အကြံဥာဏ်များ ပေးပါဦး
ခရီးသွား ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက် … နိုင်ငံခြားသို့ မထွက်ခွာမီ ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို သိထားပါ။ လိုချင်သောရလဒ် မည်သို့ရရှိမည်ကို အတိအကျသိသောအခါတွင် ပုံကောင်း အခွင့်အလမ်းများနှင့် ရိုက်ကူးမှု၏ ဖန်တီးမှုအပိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အာရုံစိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ပိုတိုးတက်အောင် ကူညီပေးခဲ့တာက တခြားသူတွေရဲ့ အလုပ်ကို တစ်ဖက်က လေ့လာတယ်။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို အတိအကျရိုက်တာက ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့ အဲဒါကနေ ဘာသင်ယူနိုင်သလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးမိပါတယ် ။ ဓါတ်ပုံဆရာ အနေနဲ့ ဒီဘောင်တွေ ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကနေ ဘယ်လို ပုံရိုက်ယူရမလဲဆိုတာ စိတ်ကူးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Magnum စာအုပ်နှင့် ပြပွဲဟာ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦး၏ ကွဲပြားခြားနားသော ချဉ်းကပ်ပုံများအကြောင်း လေ့လာသိရှိနိုင်စေသည့် ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Steve McCurry ကဲ့သို့သော ဓာတ်ပုံဆရာကြီးများကို လေ့လာကြည့်ရှုခွင့်ရပါက အလွန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့… ကျွန်တော် အရင်က ပြောခဲ့သလိုပဲ အဖွဲ့လိုက် ဓာတ်ပုံလေ့လာရေးခရီးမှာ ပါဝင်ရတာကလည်း အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။
ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များက အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေပြနေသည့် ဓာတ်ပုံများ